Ukwahlula abaThengi sisitshixo sakho kuHlumo lweShishini Ngo-2016 | Martech Zone
Ngo-2016, ukwahlulahlula okrelekrele kuya kudlala indima ekhokelayo kwizicwangciso zentengiso. Kuya kufuneka bazi phakathi kwabaphulaphuli babo kubathengi kunye nethemba lokuba ngawuphi umntu obandakanyekayo kunye nefuthe. Ukuxhotyiswa ngolu lwazi, banokuhambisa imiyalezo ekujoliswe kuyo kunye nefanelekileyo kweli qela eliya kukhulisa ukuthengisa, ukugcinwa, kunye nokunyaniseka okupheleleyo.
Esinye isixhobo setekhnoloji ngoku esifumanekayo sokwahlulahlula isahlulo seNxalenye yaBaphulaphuli esivela SumAll, umboneleli wedatha edibeneyo kubahlalutyi. Le nkonzo isebenzisa idatha eqokelelwe kwiinkampani ezingaphezu kwama-500,000 kunye nabasebenzisi abangaphezu kwesigidi esinye. Isiseko sedatha enkulu sineenkcukacha zabantu kunye nefuthe lomntu kwimidiya yoluntu. Inkampani inokufaka idathabheyisi yabo yokunxibelelana nge-imeyile kulwahlulo lwabaphulaphuli kwaye ifumane isini, indawo, ubudala, kunye nedatha yemidiya yoluntu.
Ukuxhotyiswa ngolu lwazi, abathengisi bangenza imikhankaso ejolise kuyo ngeendlela ezahlukeneyo, ezinje ngothungelwano lwentlalo, amaqonga entengiso, i-imeyile kunye nokwenyuswa kwedesika yokunceda. Ukwahlulahlula kuvumela ukwenziwa komxholo ohambelana ngakumbi nobomi bomthengi. I-imeyile ekhuthaza umamkeli ukuba "asilandele kwi-Instagram" yenza ingqiqo ngakumbi xa iqinisekisiwe ukuba, ubuncinci, baneakhawunti ye-Instagram. Intshukumo "yokulandela" emva koko ifuna ukucofa okanye ezimbini, endaweni yayo yonke inkqubo yokubhalisa.
Nalu ulwandlalo lwe Icandelo laBonke aBaphulaphuli Inkqubo kunye nendlela abathengisi abanokuthi bayinyuse ngayo le miphumela:
Inkampani ilayisha uluhlu lwe-imeyile
Injini yeSumAll ifumana umrhumo we-Facebook, Twitter, kunye neeakhawunti ze-Instagram
Ukuzibandakanya kunye nenqanaba lempembelelo yenethiwekhi nganye iyahlaziywa. Ukuzibandakanya kukangaphi umsebenzisi enxibelelana naloo ndawo yentlalo, kwaye ifuthe linani labalandeli.
Ubalo lwabantu lutsaliwe ngokujonga ngokungafaniyo kwidilesi ye-imeyile kunye nesiseko sedatha
Esi sixhobo sikwabonisa ukwahlulahlula phambili kubasebenzisi be-Twitter evumela abathengisi ukuba bafake uluhlu lwezinto ezenziwa nge-Twitter emva koko batsale ulwazi lwe-imeyile kunye noluntu. Abathengisi banokuchitha izixhobo ekwakheni i-Twitter ngokulandela ukuzithemba ukuba ekugqibeleni banokunyusa abo balandeli kunxibelelwano oluninzi lwamajelo.
Eli lithuba lamajelo amaninzi lelona lungelo liphambili kwicandelo elinje. Abathengi balindele amava ahambelanayo kunye nokuzibandakanya, nokuba bayasebenzisana nophawu nge-Instagram okanye ngedesika yoncedo lwengxoxo. Isixhobo esifana neCandelo labaphulaphuli sinamandla kuba sinokukhokela abathengisi kwinqanaba lokuzibandakanya umsebenzisi anokuba nalo ngejelo lasekuhlaleni. Cinga ngabantu ababini, bobabini abaneakhawunti ye-Instagram, kodwa omnye unabalandeli abasixhenxe, kwaye omnye unabalandeli abangamawaka angama-42.4. Ukuba ezi zimbini zidityanisiwe kunye kwiphulo le "Instagram", kuyakubakho iziphumo, kodwa azilungelelaniswanga. Abathengi okanye amathemba anolwalathiso olukhulu lweephulo ezenziwe ngokwezifiso kunye nezibonelelo zentengiso njengoko ixabiso labo kwisitishi sinokubanamandla.
Ulwazi lwesahlulo sentlalontle lungasetyenziselwa ukwazisa idesika yoncedo, iCRM, kunye namanye amaqonga okuzenzekelayo okuthengisa malunga nabathengi abanokubaluleka. Umzekelo, idesika yoncedo incoko kunye nenkqubo yefowuni inokumakisha abasebenzisi ngaphezulu kwe-100,000 abalandeli be-Twitter, kunye nemiyalelo yommeli ukuba abanike isivumelwano esikhethekileyo esisekwe ku-Twitter okanye ukunyusa. Le ndlela ijolise ngakumbi, kwaye ikwazalisekisa isidingo sokuba abathengi abaninzi babonwe njengabantu ngabanye, ngakumbi ukuba abathengisi benza ezi zinto ngeendlela ezingenamthungo nezingabonakaliyo.
Icandelo elinjalo elibandakanya ulwazi lobudala kunye noluntu kunye nalo lenza imidlalo yeAdWords eyomeleleyo, njengoko abathengisi banokutshatisa iintengiso zabo ezibonisiweyo kwiiseti ezithile zabathengi. Oku kubanika ithuba lokubhida ngamagama aphambili, kodwa kuphela kubaphulaphuli ekujoliswe kubo ukuze inkcitho ingaphumi kulawulo.
Ukwahlulahlula kuyahluka ngaphaya kwamanani oluntu alula (abaneminyaka engama-20 ukuya kwengama-35 ubudala eMassachusetts), bangena kwindawo entsha ebandakanya indlela yokuziphatha yenethiwekhi kunye nezinye izinto ezibonelela abathengisi ngombono ocacileyo kunye nolungileyo wabathengi babo.
Qalisa kwi-SumAll Simahla!
tags: CRMFacebookyenkxasoisahlulouhlalutyo kwezentlaloIyonkeTwitter
NgoJanuwari 24, 2016 ngo-2:19 PM
Dane, ingaba ikhona iB2B elingana nale nkonzo?